Gaghị na-ede blọgụ ruo mgbe ebighị ebi | Martech Zone
Fraịdee, June 6, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m na-agwa ndị folks banyere ịde blọgụ, ọtụtụ n'ime ha na-ajụ m ma ọ bụrụ na ịde blọgụ dị ebe a iji nọrọ.
Kingjụ mmadụ ma ọ bụrụ na ịde blọgụ ga-anọ ebe a ruo mgbe ebighi ebi dịka ịjụ ụmụ okorobịa ndị na-ebi akwụkwọ akụkọ ha na Gutenberg pịa otu. Dị ka mgbasa ozi na - akwụghị ụgwọ, ịde blọgụ ga - agbanwe na teknụzụ, a ga - azụta ndị na - ede blọgụ nwere nnukwu ihe, na blọọgụ ga - agbakọta ma soro ndị ọzọ na - ekwurịta okwu.
Gingde blọgụ na-aghọ ngwa ngwa na usoro na atụmatụ maka ụlọ ọrụ, mana ọ gaghị ewe ogologo oge tupu ego ya adaa azụ 'na usoro nkwukọrịta ọzọ' nke ahụ nọ ebe ahụ yana akara, ọnọdụ, email, saịtị weebụ, yana mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta.
Ndị na-ede blọgụ nwere ọgụgụ isi ga-adabere iji nyere ụlọ ọrụ aka ịkwaga agịga ahụ. Afọ ole na ole sochirinụ ga-adị mma maka ndị na-ede blọgụ, ndị ga-anọgide na-ebuwanye ibu site na nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-agba izu ma ọ bụ oge niile. Nke ahụ dị mma ịnụ, ọ bụghị ya? Ọ pụtara na ihe a niile abawo ya - ịkwụwa aka ọtọ na nghọta nwere ike wetara gị ihe ịga nke ọma.
Na ederede ahụ, na-ekele gị Loren Feldman, blogger na-aga nke ọma ga-eme ụfọdụ ederede na vidiyo maka c | net.
Akụkụ akụkụ: Mgbe m na-atụ ụjọ na Loren's raspy, cussing, in-your face, East Coast rants… ma ọ bụ na-enweghị nchekasị na-ele ya ka ọ na-akwa ụra na akwa - Enwere m ụjọ maka nghọta ya na ọganiihu ya. O gosipụtara na ị nwere ike ime ihe n'eziokwu, bụrụ onwe gị, nwee echiche, ma nwee ihe ịga nke ọma.
Ebee ka ịde blọgụ na-aga?
A ga-enwe ihe ọhụrụ ịde blọgụ n'ọdịnihu, dị nnọọ ka na akwụkwọ akụkọ… ma ọ gaghị ewe otu narị na iri ise afọ. Ọhụụ m banyere onye na-ede blọgụ n'ọdịnihu nwere ike ịgụnye nnabata olu okwu na-ederede nke gafere nzacha ụtọ asụsụ, yana algorithms mara mma nke na-ahazi ọdịnaya, yana mmekọrịta 'echiche' na akpaaka na isiokwu metụtara ya dị na weebụ.
Blogde blọgụ na-eme n'ọdịnihu nwere ike ịlaghachi na Ahịa, n'agbanyeghị na anyị na-alụ ọgụ dị ka hel iji gbochie ya n'ebe ahụ taa. Ihe mere anyị ji alụ ọgụ ya ugbu a bụ n'ihi na a na-enyekarị onyinye azụmaahịa maka izu oke, mma na mma - ọ bụghị nsonaazụ, eziokwu na nghọta. Ndị na-ede blọgụ na ịde blọgụ adabaghị n'ime ugbo ala cubicle Marketing Executive.
Ozugbo ụlọ ọrụ ghọtara na ihe ịga nke ọma ha bụ maka etu ha si ekwupụta nke ọma na ịkwalite mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ha na atụmanya ha, ngalaba ngalaba azụmaahịa ga-amalite inwe ekele maka onye nwere bọọlụ ịbanye na blọọgụ ma gwa ya dịka ọ dị. Mgbe ha mere, ire ahịa ga-agbanwe na ụlọ ọrụ ga-aka mma maka ya.
Mgbe ọ bụ ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ, ọ ga-agbanwe ndụ maka blogger nọọrọ onwe m dị ka m. Ulo oru di iche iche gha acho ndi nwere ihe ndia, onye gha ede ihe nke oma ma duputa ha n'ime akpa ha. Ọ bụrụ na m na-agba ọsọ HP, Dell, IBM or Cisco, M ga-eji padding m web ọnụnọ na-ede blọgụ taa - tupu ha niile na-arahụ echi.
Mgbe onye ọ bụla na-ede blọgụ, anyị ga-ebuli elu na ntanetụ nke onye ọzọ ma ọ bụ na-agwụ ike. Enwela ahụ iru ala, anyị agaghị anọ ogologo oge.
Nọgidesiri ike na ụgbọelu maka awa 3.5
Jun 7, 2008 na 10:21 AM
Oh, Kedu ka m si cho ka ịde blọgụ ga-aga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi. Mana ọ bụrụ na m ga-ewepụta ezi uche, enwere m olile anya na ọ ga-anọ ruo afọ 5 ruo 10 ọzọ. Enwebeghị m ihe ịga nke ọma m chọrọ maka onwe m n'ọhịa a, n'agbanyeghị na m ga-ekweta na enwetaghị m oge zuru oke iji mee ya (ịde blọgụ) n'ihi mbọ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, achọrọ m ịghọta ihe ịga nke ọma, ọbụlagodi, na blọọgụ nke m, yana na blọọgụ m chọrọ inweta.
Echere m na mgbanwe ga-ewere ọnọdụ ka teknụzụ na-agbanwe, anyị ga-enwe ngwaọrụ dị iche iche iji rụọ ọrụ anyị yana nke ahụ ga-ewere ụzọ ọzọ. Otu ihe atụ bụ PC a na-ebugharị ebugharị, anyị niile nwere ike ịnweta otu n'ime ndị ahụ yana nke ahụ na-etinye blọgụ karịa oge niile (ikekwe nke ahụ emeworị.)